Home » Buddhism » မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာကြောင့် ပြာ
ဒီစာအရဆိုရင်တော့ မိုးပြာဟာ သံဃာ့ဘေဒကကံထိုက်နေပြီလို့ ကျနော်ယူဆတယ်။
သံဃာ့ဘေဒက ကံ ဆိုသည်ကို Nan Shin က ဘယ်လိုနားလည်ထားပါသလဲ။ ယနေ့သံဃာသည် အမှန်တကယ် အညီအညွှတ်ရှိကြပါသလား။ ဟုတ်တာကို ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်တာကို မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောဆိုတာကို (တထာဂတ) လို့ပြောရင်…………။ တကယ်တော့ အဘိဓမ္မာသဘောတရား အရ ကြောက်တယ်ဆိုတာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်လားဆိုတာ ပထမပြန်စာမေးပွဲကြောင်းပြောသူ ဆိုတော့ နောကျေနေအောင်သိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ အကုသိုလ်စိတ်တွေက ဘယ်လောက်ရှိတာ
အတော်ရဲတင်းတဲ့ တင်ပြချက်ပါပဲ။ သီးခြားဂိုဏ်းထောင်တာ လွတ်လပ်ခွင့်မိုလို့ မပြောလိုပေမဲ့ မိမိလိုရာဆွဲပီး အရိယာ စင်ပြိုင်ထောင်တာကတော့ အစွန်းရောက်သွားပါပြီ။ သူတို့လိုပြောကြေးဆို ဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိလည်း ဘယ်ဟာက ဘုရားလည်း၊ သူပြောတိုင်း ဘုရားဖြစ်ရမှာလား စောဒက တက်လို့ရပါတယ်။ သက်သေမရှိဘူးလို့ အော်ဟစ်ငြင်းချက်ထုတ်လိုသူများ သတိပြုရန်က ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါ အစပြုတဲ့ ဗိုလ်ငါးဗိုလ်ဦးစီးတဲ့ အလုပ်မျိုးပါ။ လုံးဝဥဿုံ မယုံကြည်လို့ ကိုယ့်လမ်းစဉ်နဲ့ ကိုယ်သွားလည်း စည်းဘောင်လေးတော့ ရှိစေချင်ပါတယ်။ နို့မို့ရင် သူများဘာသာက ဘုရားကို ဘိုးတော်လို့သတ်မှတ်၊ ဗုဒ္ဓဘုရားကိုလည်း တမန်တော်လို့ လိုရာစွဲပြောရင်း ရှင်မိုးပြာတို့ပြောနေတဲ့ လူမှုကျင့်ဝတ်တွေပါ ပျက်စီးသွားနိုင်လို့ပါ။
ကြောင်ကြီးတော့ တော်တော်လေးစားသွားပြီး ဒါပေမယ့် ရှင်မိုးပြာကြောင်းလေ့လာကြမယ်ဗျာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတော့ ရှိရမှာပေါ့။ တိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး သူ့ဆီမှာ ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တွေရှိရင်လည်းယူရတာပေါ့။ ဆရာတော်ဦးဥာဏဿရကလည်း ဟောထားတယ်ဗျာ ခရစ်ယာန်၊ အစရှိတဲ့ ဘာသာခြားတွေနဲ့တောင် အတူလက်တွဲကြဖို့ပြောနေရင် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ဘာလို့လက်မတွဲနိုင်စရာရှိရမှာလဲ။ အဓိက က ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအကျိုးရှိဖို့ဘဲမို့လား
အရိယာ ဆိုသည့် အရိယာ၏အဖြစ်ကို ကြောင်ကြီး မည်သို့နားလည် ခံယူထားပါသနည်း။ ခေတ် ကာလတို့သည် အမှားတရားတို့အား တိုက်စားချေဖျက်သွားမည်ကား အလွန်သေချာလှပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထေရ၀ါဒကိုလဲစွန့်လိုက်တာနဲ့ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လိုက်တယ်လို့ တဖတ်သတ်မယူနဲ့လေ။ မြန်မာနိုင်ငံက ထေရ၀ါဒတစ်ခုတည်းကသာ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဘယ်သူတွေက အသိအမှတ်ပြုထားလဲ။ ကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒကွဲတွေ ရှိသေးတယ် ဆိုတာကိုလည်း မမေ့နဲ့ဦးလေ။ ငါတို့မှသာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ပဲ ဆိုတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အတွေးတွေ မရှိသင့်တော့ပါဘူး parlayar ရယ်။ ကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒကွဲ (မဟာယာန၊ တိဗက်၊ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ) တွေကလည်း သူတို့မှသာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ပဲ ပြောကြမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထေရ၀ါဒဟာ သူတို့အမြင်မှာ မစစ်တော့ဘူးဖြစ်နေမှာပေါ့။ မျှမျှတတ စဉ်းစားပေးမှပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မောင်ပိုင်မစီးချင်းပါနဲ့။ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ဦးလေ။
kosicca ရေ …..
မောင်မိုးပြာတင်ပြပေးနေမယ့် သာသနာတော်ရေး လျှောက်ထားတောင်းဆိုလွှာကို ကုန်စုံအောင်
ရှင်ဥာဏရဲ့နောက်ကြောင်းလေးပါ ရေးရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။ ဘယ်လို ဦးနှောက်မျိုးမိုလို့ ဒီလို လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေ့လာရအောင်ပါ။ ဂိုဏ်းထောင်တယ်ဆိုတာလွယ်မှတ်လို့..
တခါမှမကြားဘူးတဲ့လူတယောက်က ဂိုဏ်းထောင်တာကို နောက်ကလိုက်ကြမယ်ဆို တော်တော်ပေါတာပေါ့။ ကျွန်တော်သိသလောက် မြန်မာနိုင်ငံလို ကျမ်းတတ် ပေတတ် နိုင်ငံမှာ လူသိရှင်ကြား ဂိုဏ်းထောင်တယ်ဆိုထဲက နဲတဲ့ သိတ္တိတော့မဟုတ်ဘူး။ ရှင်ဥက္ကဌလို ဘာတွေနောက်ကြောင်း မရှင်းဖြစ်ထားလဲ သိချင်လိုက်တာ..
ရှင်ဥာဏရဲ့ နောက်ကြောင်းတွေကိုလည်း ကုန်ကုန်စုံစုံ တင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်၊ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး စောင့်ဖတ်ပါ။ ဒီလိုပြောလို့ ဆွယ်နေတယ်လို့ထင်ကြပြန်ဦးမယ်၊ သမိုင်းမှားကြောင့် နှောင်းလူတို့ ဒုက္ခမရောက်စေလိုရင်းအမှန်ပါ။ အမှန်တရားတို့မည်သည် မည်သူဖျက်လို့မှ ကြေပျက်ရိုးမရှိပါ။ မောင်မိုးပြာတို့မှားလျှင် မောင်မိုးပြာတို့ ကြေပျက်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တည်းတစ်ယောက် ကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုလျှင် ဤမျှ အန္တရယ်ကြီးသောအလုပ်ကို လုပ်နေရန်အကြောင်း ရှိနိုင် မရှိနိုင် ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
သူတို့က ဘာကြောင့် အပြာရောင်ကို ရွေးချယ်တာလဲဗျ။ အစိမ်းရောင် ၊ အမဲရောင် ဆိုရင်ကောဗျာ။
ပြာ(ပျာ)တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတာကို ပြောတာနေမှာဗျ။
အပြာရောင်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တာကတစ်ချက်၊ နီလံဝါ၊ ကဒ္ဒမံဝါ၊ ကာဠသာမံဝါ ဆို
မောင်မိုးပြာကရော မိုးပြာဂိုဏ်းဝင်လား။ မိုးပြာဂိုဏ်းဝင်ဆိုရင် အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်လား။ အရိယာသူတော်စင်အစစ်ဆို၇င်တော့ ဒီလိုမျိုးရေးမယ်မထင်ဘူး။
ဘုရားလက်ထက်တော်အခါက ရဟန်းအချင်းချင်း တွေ့ကြပြီဆိုလျှင် အရှင်ဘုရား ရဟန်းကိစ္စပြီးပါ
အယူဝါဒမတူရင်.. တရားဝင်..လူထုရှေ့.. တရားပြိုင်သင့်တာပေါ့..။
… အယူဝါဒမတူတာနဲ့.. ဥပဒေအရဆိုပြိး.. ကိုယ့်လူကိုယ်နဲ့.. အဓမ္မ၀ါဒကြေငြာ.. ပြီးတော့..အဲဒီမိုးပြာတွေကို.. ထောင်ချခွင့်လုံးဝ(လုံးဝ) မရှိပါဘူး.။ လူ့အခြေခံအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်တာပဲလေ…။
ဘယ်သူတော်စင်မှ..ရဟန္တာ ဖြစ်လျင်တောင်.. ဖြစ်ပါပြီဟေ့ဆို ထုတ်ပြောလို့ ရသည်မဟုတ်
မကြားဘူးရင် ငါပြောမယ်ကွ။ ဘုရားက ဓမ္မစကြာမှာ သူဘုရားဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာတာပဲ။ တကယ်ဆိုရင် မကြေငြာသင့်ဘူးပေါ့။ ယခုခေတ်သာလာပြီး ကြေငြာကြည့်ပါ့လား။ ဖမ်းပြီး ထောင်ချပစ်မှာ။ သူ့ဘာသာသူ ဘုရားမကလို့ ဘုရားထက် ဘုရားဖြစ်နေပါစေ။ ဘာမှတ် သလဲ သံဃမဟာနာယကကွ။ဘုရားနော် ဘုရား ဟင်း…ဒင်းကြေငြာတာစောသွားလို့ ။ သို့မဟုတ်ရင်တော့လား။ ဘာပြောကောင်းမလဲ။
ပုလင်းကိုင် မူးနေသူတွေအတွက်တော့ ရဟန္တာဆိုသောစကားကို နားခါးအုံးပေမည်ပေါ့။ ကြားဖူး ချင်ရင် ပုလင်းလွှတ်လိုက် ငှဲ…ငှဲ…ငှဲ
မိုးပြာဝါဒဆိုပြီး ပြောရင်တော့ ဘာမှပြောစရာမရှိပါ။ ထေရ၀ါဒဆိုပြီး ပြောနေလို့သာ အတိုက်အခံဖြစ်နေရတာပါ။ ကိုယ်ထင်ရာ ကိုယ်ယုံရာ ကိုယ်ယူနိုင်ပေမဲ့ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်ခံဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်နှင့်မတူကိုယ်ရန်သူဆိုတာထက် မြွေပွေးဆိုတာခါးပိုက်ပိုက်ထားရန်မသင့်ပါ။ ပြိုင်ဆိုင်မှုတိုင်းမှာ အားကြီးသောသူက အားနည်းသောသူကို အနိုင်ရတတ်ပါတယ်။ သာသနာ ၂၅၅၀ ခန့်ရှိသေးလို့ထေရ၀ါဒ သာသနာ အားကောင်းတဲ့မြန်မာပြည်မှာ အခွင့်မသာဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သာသနာ အားနည်းသွားချိန်မှာတော့ အခွင့်သာလာပါလိမ့်မယ်။
nature ရေ မိုးပြာကလည်း ထေရ၀ါဒလို့လည်း မပြောပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲက အယူဝါဒကွဲတစ်ခုလို့ပဲ ဆိုလိုတာပါ။
“ထေရ၀ါဒကို စွန့်ပစ်ကြသော်လည်း လူ့ဘောင် လူ့ဘ၀သို့ လူ့အသွင်သဏ္ဋာန် လူပုံဟန်များဖြစ့် နေထိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိပြီးသော တရားဓမ္မများသည် ကျွန်ုတို့ကို လူလိုဝတ်၊ လူလိုနေ၊ လူလိုစား၊ လူလိုသွားပြီး လူလိုပြောဆို လုပ်ကိုင်ရန် အ ခွင့်မရ ရှိကြပါသည်။”
သာသနာတော်ရေးလျှောက်ထားတောင်းဆိုလွှာကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးနေမှာပါ။ ကုန်စုံအောင်
လူအခွင့်အရေးရှုထောင့်က ထောင်ချခြင်းသည် မှားနိုင်သော်လည်း၊
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များမှ ပရမတ်အလိုဖြင့် ကောက်ရမည်ဟု ဗုဒ္ဓမဟောခဲ့ပါဘူး။ ဒါ ပရမတ်သမား ဗြဟ္မဏတွေက ဗုဒ္ဓတရားထဲ ပရမတ်တရားတွေ ရောထည့်ထားတာလို့ သမိုင်းမှာ လေ့လာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ပရမတ္တသစာကို ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိယသစ္စာလို့ ထင်နေသေးရင်တော့ ပထွေးကို အဖေလို့ ထင်နေတာပါပဲ။ ပထွေးကလည်း ဟန်ဆောင်ကောင်းတော့ အဖေလို့ ထင်ချင်စရာကို။ ဒါပေမယ့် အမှန်ကို ပြန်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ရင် ပထွေးဟာ ပထွေးပါပဲလို့ သိလာကြမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားရင် http://www.facebook.com/profile.php?id=100002955909111&sk=wall မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ အရိယသစ္စာသဘောတွေ သေသေချာချာလေ့လာလို့ရပါတယ်။ အဖေအမှန်ကို ပြန်တွေ့နိုင်ကြပါစေ။
ထို့ကြောင့် ထောင်ချခြင်းသည် ၄င်းတို့လှည့်ဖြား လိမ်ညာမှု အတွက် ရလာဒ် ဆိုက ဆိုနိုင်ပေသည်။
အသိအမြင်ထွေပြား ဘုရားတွေဟာဟား ယုံစားဖို့ခက်လှပါတယ် အတွေးစိတ်က ဦးကျော်ဟိန်းဆို တဲ့သီးချင်းကြားဖူးမယ်ထင်တယ်။ ဒီစာသားလေးပြောင်းပြီး ထည့်ဆိုလိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်ဗျ။ ဘုရားတွေဝါဒပြား တရားတွေအလကား ထောင်ကျဖို့မခက်လှပါတယ် အခုခေတ်က စစ်အစိုးရရဲ့ အာဏာရလို့ ထောင်ချနိုင်တာပါကွ။ အမှန်ကကွ ဘုရားတွေကို ဘုရားအဖြစ်က ကျွတ်အောင်ချွတ်သင့်တာကွ ။ ဘုရားဆိုတဲ့လူတွေ ဘုရားလုပ်နေကြလို့ သူ့နောက်ကလိုက်သူတွေအူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေကြတာ။ ကမ္ဘာကြီးထဲနေ ဘုရားကြီးမောင်းထုတ်ပစ်သင့်နေပြီဗျ။
သံဃဘေဒက ကံအကြောင်းတင်မဟုတ်ပါဘူး။အခြားအကြောင်းများစွာကိုလဲ လူကြီးလူကောင်းပီပီ
ပြောတော့ဖြင့်ကွာ ဘုရားက ဒေဝဒတ်နဲ့ ရာဟုလာကို မခွဲခြားပဲ မေတ္တာထားတာတော့ အတူတူ ဘာညာ ပြောပြီး ဒေဝဒတ်ကြတော့ ပုဒ်မကြီး အကြီးကြီးတပ်ပြီး စွပ်စွဲတယ်။ သံဃာသင်းခွဲတဲ့သူကြီး ဘာညာလျှောက်လုပ်တယ်။ ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေများ မှားလို့ သိက္ခာပုဒ် ပညတ်လျှင် အစဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မို့ အပြစ်ကလွတ်စေတဲ့ဗျ။ ဒေဝဒတ်ကြတော့ အစဦးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ အပြစ်ကမလွတ်ဘူးဗျ။ ဒါဘယ်တော်မလဲ။ သေခါနီးမှ အသေဖြောင့်ပါစေတော့ဆိုပြီး ဘုရားငယ် ဆုပေးလိုက်သတဲ့။ ဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ဗျာ ဘုရားကလူလည်မျိုးပါလို့။
mayb“khit thit day wa dat”
အများသိအောင်ဆို၇င်တော့ Debate မှာ လုပ်စေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ ဘယ်သူကပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဝါဒတစ်ခုကို ထူထောင်တဲ့နေရာမှာ လူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့ ကိုပဲ ဦးတည်ပြီးတော့ တည်ထောင်ကြတာပါပဲ ။
ွှTo ashinariya …. ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ထေရ၀ါဒ အပြင် အထင်ကရ အဓိကဖြစ်သည့် တခြားမူကွဲများ ဖြစ်သော –
ဘ၀ ဆိုသော ပါဠိပုဒ်ကို မြန်မာစကားလို ဘယ်ကဲ့သို့ ပြန်ဆိုကြမည်နည်း။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဘ၀များကို ပယ်သတ်ရန်ညွန်ပြတော်
“ဘုရားနော် ဘုရား ဟင်း…ဒင်းကြေငြာတာစောသွားလို့ ။ ”
တောင်းပန်ပါတယ် ကို သွေးသစ် ။ ကျွန်တော်က ဘယ်ဘုရားကိုမှ မစော်ကားလိုပါ။ ဒီလိုပြောပြတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် lionking စိတ်မဆိုးပါ။ ဝမ်းတောင်မှသာမိပါတယ်ဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုလို အင်တာနက်ကနေပြီး လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရတာဟာ ကျွန်တော့်အတွက် မဟာဒီမိုကရေစီ လို့ပြောရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောမိတာပါ။ ကျွန်တော်ဘုရားကိုယုံပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိယုံသလဲဆိုရင် ဘုရားဟာတို့ဘဝရဲ့ လမ်းကြောင်းကို အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးလမ်းကို ညွှန်ပြပေးသူလို့အထိ မြင်မိ သိမိ တွေးထင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောလိုတာက ဘုရားဆိုတဲ့ သင်္ကေတ စကားလုံးတွေပေါ်မှာ တင် စွဲကပ်ပြီး ကြွားနေဝါနေဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိစေချင်ရိုးအမှန်ပါ။ စကားလုံးတင်ပြချက်တွေ ကြမ်းတမ်းတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ရွာသားတို့ရေ။ ကျွန်တော် lionking ဟာ သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာကို အလေးအမြတ် ဦးညွတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော် lionking ရေးသားခဲ့တဲ့စာတွေဟာ ဘယ်သူကိုမှ စော်ကားလိုစိတ် မရှိရိုးအမှန်ပါ။ တခါလာလဲ စာအုပ်ကြီးညွှန်း တခါလာလဲ ပိဋကတ်ညွှန်းဆိုတော့ ကိုယ်မသိတာတွေနဲ့ အခြိမ်းခြောက်ခံနေ ရတော့ ပေါက်ကွဲမိတာပါ။
မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက် မြတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကို ပေထက်တင်ခဲ့တာ အမှားတွေအမှန်ဖြစ်လာမှာစိုးလို့အမြော်အမြင်ရှိရှိ ကျမ်းတွေပြုစုခဲ့တာအခုလို သာသနာ ဖျက်တွေ ကာကွယ်ဖို့ပါ။ ပြောတော့ ဘယ်ဘုရားကိုမှ မစော်ကားဘူးဆိုတော့.. ဘုရားဘယ်နှဆူများ ကိုးကွယ်ချင်လို့ပါလဲ။ မဟာဒီမိုကရေစီကို ရသလိုအသုံးချပြီး ၀ါဒဖြန့်မယ်ဆိုလဲ ကြည့်တော့လုပ်ဗျာ။ ဘုရားကို လူလိုပြောတယ့်လူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကြည့်ချင်းအားဖြင့် ခင်ဗျားဘယ်လိုလူဆိုတာမှန်းလို့ရပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ခင်ဗျားတို့တော်ကြပါတယ်.. ဘုရားရဲ့တရားကို ကိုယ်လိုသလိုဆွဲပြောနိုင်လောက်တဲ့ဥာဏ်ရှိတယ် ဆိုတာကိုက တော်တယ်ဆိုတာ မငြင်းလိုပါဘူး။
ခင်ဗျားတို့နောက်ကြောင်းဘာတွေမရှင်းခဲ့လို့ ဂိုဏ်းခွဲပြီး တစင်ထောင်လဲတော့ မသိပါဘူး… ကျွန်တော်သိသလောက် အဲဒီလို လုပ်ကြတဲ့သူတွေဟာ ပါရာဇိကကျနေကျတဲ့ စာတတ်ပေတတ်တွေပါဘဲ.. ရှင်ဥက္ကဌလိုပေါ့.. မသေခင် ရသေ့စိတ်ဖြေ ကိုယ့်ဘ၀ရှေ့ရေး ကြိုတွေးပြီး ဂိုဏ်းထောင်ဆရာလုပ်တာလိုပါဘဲ။ အပယ်ကို ကိုယ်တယောက်ထဲမသွားရဲတာနဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့တဲ့သူတွေပါခေါ်သွားချင်ကြတဲ့ …. ပညာတတ် လူယုတ်မာ … မျိုးတွေပေါ့ဗျာ….
တောင်တွင်းကြီးက ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကို အပြစ်တင်ချင်ရင် ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံကို ဘယ်လို ဖြေရှင်း သွားသလဲ အရင်ဖတ် အရင်လေ့လာ။ မလေ့လာပဲ အပြစ်တင်ရင် အများရယ်စရာဖြစ်မယ်။ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ(တောင်တွင်းကြီး)ဆိုတာ ပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့ သူ့လို Bible တွေကို ဒိုးလိုမွှေ ရေလိုနှောက်နိုင်တဲ့သူ မြန်မာပြည်မှာ အခုတောင် မပေါ်ပေါက်သေးဘူး။ ကျောက်ကွင်းမှာ အနိုင်ရခဲ့တာဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒေသနာတွေကြောင့်များ ထင်နေသလား။ ဝေးသေးရဲ့။ အခုအချိန်မှာ သူ့လိုဒဿနကို ဒဿနချင်း ယှဉ်ပြီးတိုက်ဝံ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလို့လဲ။ ဘာသာရေးဒဿနဆိုတာ အဲသလို စဉ်ပြိုင် ယှဉ်ပြိုင်ဝံ့ရမှာ။ ဘယ်သူပြိုင်ဝံ့သလဲ။ ပါးစပ်ကပြောတော့ တရား တရားနဲ့ လုပ်တော့ အနိုင်ကျင့်ပြီး ချေက်တွန်းတတ်ရုံမှတပါး မတတ်ကြတော့ဘူး။
moegyothwar ရေ (ကျွန်တော်သိသလောက် အဲဒီလို လုပ်ကြတဲ့သူတွေဟာ ပါရာဇိကကျနေကျတဲ့ စာတတ်ပေတတ်တွေပါဘဲ.. ရှင်ဥက္ကဌလိုပေါ့.) ဆိုပြီး ကိုယ်မလိုတာနဲ့ ထင်ကြေးနဲ့ မပုတ်ခတ်သင့်ဘူးလေ။ အဲဒီလို ပြောလို့ ရကြေးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံက မင်းအထင်ကြီးနေတဲ့ ဘုန်းကြီတွေ တော်တော်ပါသွားမယ်နော်။ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန် မထောင်းရဘူးကွ။ ခတ်တာပဲ။ သူများလက်ညိုးတစ်ချောင်းထိုးရင် ကိုယ့်ဘက်ကို သုံးချောင်းပြန်ထိုးနေတယ်ဆိုတာ သတိထားမှပေါ့။ ကိုယ်ပေါင်လှန်ထောင်းပြလိုက်ရမလား ?။ moegyothwarတို့ ဘုရားလောက်နီးနီး အထင်ကြီးနေတဲ့ မင်းကွန်းတိပိဋကကြီး မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေ – – – ။ဆက်ပြီးပြောရရင် ကုန်သွားမယ်နော်။ ဆက်မပြောကြေး။
ခက်တာဘဲ… ခင်ဗျားတို့က မရှိတော့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးကိုမှ ဘယ်လိုတွေများ ပြောကြအုန်းမလဲ။ အဲဒါဘဲလေ.. မူမမှန်တဲ့သူတွေဟာ အမှန်ကိုရင်မဆိုင်ရဲတော့ တွေ့ရာစွတ်စွဲတော့မှာဘဲလေ။ ရှင်းပြနိုင်တဲ့သူ မရှိတော့ဘူးဆိုမှ ကကြတဲ့ဇာတ်ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ အပြာချုပ်ကြီးကို ဓမ္မစက်နဲ့ အရေးယူခဲ့တော့လဲ နာမည်ဖျက်ကြတာ ဆန်းမှတ်လို့….
ရှင်ဥက္ကဌ ဘာလို့ လူသေလူဖြစ် ဇာတ်သွင်းလဲဆိုတာကို သေသေချာချာလေ့လာပြီးမှ ဆွေးနွေးပါကွာ… အင်မတန်တော်တဲ့ ထတ်မြတ်တဲ့ ဆရာတော်ပါ… ခက်တာက ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်အတွက် သံသရာမအေးမှန်းသိလို့ ရသေ့စိတ်ဖြေ ကြံသွားတဲ့ ပညာတတ် မိုက်သွားတဲ့ ပညာတတ်လူမိုက်တဦး လို့ဘဲမြင်ပါတယ်။
moegyothwar ရေ ဆက်မပြောဖို့ ပြောထားတာနော်။ ကျုပ်က ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ထေရ၀ါဒီ၊ မဟာယာန၀ါဒီလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကို ၀ါဒစွဲကင်းကင်းနဲ့ လေ့လာနေတာ။ ခင်ဗျားက ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုပါ ထင်ကြေးနဲ့ ပါရာဇိကဆိုပြီး အပုတ်ချလို့ အဲဒီလို မပြောကြေးလို့ သတိပေးလိုက်တာ။ ပြောကြေးဆိုရင် ကုန်သွားမယ်နော်။ ကိုယ့်ပေါင်တွေ ကိုယ်ပြန်မထောင်းချင်ဘူးဗျာ။ တရားနဲ့ပဲ အနိုင်ပြောကြစမ်းပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေနဲ့ အောက်တန်းမကျစမ်းပါနဲ့။ ကျုပ်ကတော့ ကြည့်နေမှာပဲ။ တရားသဘောမဟုတ်ရင်တော့ မဟုတ်တဲ့ဘက် ၀င် ဂွကျမှာပဲဗျ။
ထေရ၀ါဒ စာပေများတွင် ဟိန္ဒူဝါဒများရောထည့်သည် ဟု ဆိုလျှက် မယုံကြည်သောစကားကိုဆိုသည်ကတဖက်…..
ငြင်းလိုက်ကြ ခုံလိုက်ကြတာ ဘာအတွက်ငြင်းကြ ခုံကြတာလို့တော့ ဦးတည်ချက်ရှိကြပါလေစ။ စကားလေးတစ်ခွန်း
သည့်ထက်ရိုးသားသော ဒဿန ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိအံ့မထင်။ ဒုက္ခဆိုသောစကားလုံးကို ဒု+ခမ (၀ါ)
လက်ရှိအချိန်မှာ သာသနာကို ပြန်လည့်သန့်ရှင်းသင့်နေပါပြီ။ လူညစ်ပတ်တွေ ပွေရှုပ်နေလို့ သာသနာလဲ တော်တော် ညိုးနေပါပြီ။
ဥပမာပြောရရင်ဗျာ.. လွန်ခဲ့တဲ ၃ နှစ်လောက်က မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း ဘာသာသာသနာထွန်းကားတယ်ဆိုတဲ့ မြို့ကြီး တမြို့မှာ ညဘက် အပြင်ထွက်ရင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းရှေ့က လဘက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာမရတာနဲ့ ကျောင်းထဲက ဆိုင်ရဲ့ ခင်းထားတဲ့ခုံမှာထိုင်မိပါတယ်… အမလေး များလိုက်တဲ့ ကိုယ်တော်တွေ ထမင်းကြော်လေးစား အကင်လေးမြည်းနဲ့ပေါ့.. အဲဒါတွေဟာ သာသနာရဲ့ အမှိုက်တွေပါဘဲ.. မိုးပြာလိုဂိုဏ်းတွေဟာ.. အဲဒီလို အမှိုက်တွေ.. စုန်းပြူးဘုန်းကြီးတွေ ကျမ်းတတ် ပေတတ် ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမကို ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးနိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်လာလို့ ပေါ်လာရတာတွေပါဘဲ။
ကျမ်းတတ်လေ.. စာတတ်လေ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေ ကာကွယ်ဖို့ ရသေ့စိတ်ဖြေ ဘုရားတရားတွေကို ဘာသာပြန်ပြီး ဂိုဏ်းထောင် လုပ်စားလာကြတာပါဘဲ။ အပြာဂိုဏ်းရဲ့ ဦးဆောင်တွေဟာလဲ စာတတ်ပေတတ် — ပညာတတ် လူယုတ်မာတွေ —- ဖြစ်လို့ ဒီလို သာသနာကို ညှိုးအောင်လုပ်နေသူတွေကို သန့်စင်သင့်ပြီလို့ ယူဆမိပါတယ်….
လောကမှာ ဒဿနတခုရဲ့ အတိမ်အနက်သိချင်ရင် ဒဿနပညာရှင်ရဲ့ ကာလ ဒေသ သမိုင်းနောက်ခံ အကြောင်းအရာတွေကို ကိုယ့်အသိနဲ့ နေရာတကာလိုက်ပြီးမတိုင်းပဲ ကျကျနနလေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှသာ ဘာဝါဒဖြစ်တယ်။ ညာဝါဒဖြစ်တယ် ပြောဖို့ သင့်ပါလိမ့်မယ်။ ရမ်းကြိတ်ရင်တော့ ရမ်းကြိတ်သူကို သေချာကျနစွာ လေ့လာထားသူက ဒီကောင်ဘာကောင် လဲလို့ သိသွားပြီ။ ရှင်ဥာဏရဲ့ ပစ္စုပ္ပန် ကံဒဿနကို မပြောနဲ့ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ(တောင်တွင်းကြီး)ရဲ့ ဒဿန တောင် မြန်မာပြည်ရဲ့ အထက်မြက်ဆုံးသော ရဟန်းပညာရှိ လူပညာရှိတွေဟာ ကျကျနန မသုံးသပ်ပဲ ဝိုင်းကြဉ်လိုက် ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကအပြုံးမပျက်ဘူး။ အေးဆေးပဲ။ သူကပညာရှိဆန်တယ်။ ငါရေးတဲ့စာဟာ လူတွေအတွက်အသုံးမတဲ့တော့ရင် အလိုလိုပျက်သွားလိမ့်မယ် လို့ရေးခဲ့ပြောခဲ့တာပဲ။ ဒါကို မသုံးသပ်ကြပဲ အနိုင်ကျင့် ပြီးဖြေရှင်းကြတယ်။ ဘယ်လောက်အနိုင်ကျင့်ကျင့် လူကို(ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ)ပဲ အနိုင်ကျင့်လို့ရမယ်။ သူ့ရဲ့ ဒဿကို အနိုင်ကျင့် လို့ မရဘူးဆိုတာ မြဲမြဲမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်။ လောကမှာ အပြစ်တင်မခံရပဲနဲ့ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမရဲ့ တရားဟာ လောကငြိမ်းချမ်းရေးလို့ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့သူတွေ အခုထိငြင်း ခုံကြတုန်းပဲ။ ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင် ဘုရားနဲ့ အခုခေတ်အလှမ်းဝေးလွန်းတာကြောင့် သမိုင်းအမှားအမှန်ခွဲခြားဖို့ ခက်လွန်းတာကြောင့် ယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ထွေပြားဝေဝါးနေကြတာပဲ။ အမှားအမှန်ကိုကိုယ့်ဘာသာချင့်ချိန်။ အရွယ်ရောက်လို့မှ ချင့်ချိန်ပြီး မခွဲခြားတတ်ရင် ဘာမှသိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ အားကြီးလို့ အနိုင်ကျင့်တတ်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မလုပ်တတ်တဲ့ ဘာသာဝင်တွေ မဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ရှင်ဥာဏဒဿနဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မနဲ့ အဆက်အစပ်ရှိတယ်ပြောပြော ဒါကပဲ ဘုရားတရားဖြစ်တယ်ပြောပြော ပြောသူကအရေးမကြီးဘူး လေ့လာသူက အရင် အသူဟာ ပြောသူအောက်ရောက်သွားမှာပဲ။ ဒါနားလည်ဖို့ပဲ။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဘုရားလဲလူပဲ လူထဲမှာဆိုရင် သူ့ခေတ်သူ့အခါက တော်သူတတ်သူ ထက်မြက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မှာပဲ။ ဒါပဲ။ ဘုရားဆိုတာ ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကြီး မဟုတ် ဘူး။ လူ့လောကမှာ ဟောဒီနည်းအတိုင်းသာ နေကြ ထိုင်ကြ ပြောကြ ဆိုကြ လုပ်ကြ ကိုင်ကြရင် သာယာနိုင်တယ်လို့ ပြောသွားသူပဲ။ အပေါ်ယံကြည့်ပြီးသုံးသပ်ကြရင် အပေါ်ယံပဲသိကြလိမ့်မယ်။ အပြစ်တင်ချင်ရင် အပြစ်ဟုတ်မဟုတ် သေသေချာချာ သိထားဖို့လိုတယ်။ သို့မဟုတ်ပဲ လွဲပြီးဝေဖန်မိရင် ဝေဖန်မိသူသာ နာနေလိမ့်မယ်။ ဒဿနတစ်ရပ်ကို ဝေဖန်ပြီဆိုရင် ထိုဒဿနတွေရဲ့ သွားရာလားရာကို သိဖို့လိုတယ်။ ကိုယ့်မှာ အဲသလောက်အထိ သုံးသပ်နိုင်သလား အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သုံးသပ်မိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သာသနာတော်ကိုသန့်ရှင်းချင်ရင် လူ့ညစ်ပတ်မှုကို ယိုးမယ်မဖွဲ့ပါနဲ့။ အသင်တို့ပြောတော့ ဘုရားအဆုံးအမဖြစ်တဲ့ သာသနာက လူ့ရဲ့ အရှုပ်အထွေး အညစ်အပတ်တွေကို ရှင်းပေးလင်းပေးတယ်ဆို။ အခုလူညစ်ပတ်တွေကြောင့်သာ သာသနာညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုရင် ဘုရားဂုဏ် တရားဂုဏ် သံဃာ့ဂုဏ်တွေဟာ အရည်အသွေး မပြည့်တော့သလို ဖြစ် သွား မှာပေါ့။ တကယ်တော့ ကိုယ့်သာသနာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲ လိုက်နာရမှာပါ။ ဘယ်သာသနာကိုမှ အပြစ်ဆွဲထည့်နေစရာမလိုပါဘူး။ သံဃာတွေ ညဘက်မှာ လဘက်ရည် ဆိုင်ထိုင်လို့ သာသနာပျက်တယ်ဆိုရင် လဘက်ရည်ဆိုင်မထိုင်ပဲနေတဲ့ သံဃာတော်တွေက သာသနာကို ဆက်လက်ရှင်သန်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ကြတော့ဘူးလား။ ဘာလဲ ဆင်းသွား တဲ့ အာဏာရှင် စစ်အစိုးရကို ရေနူးပြီးစားချင်နေပြန်ပြီလား။ မရတော့ဘူး အမောင် မရတော့ဘူး။ စဉ်းစဉ်းစားစားလေး စဉ်းစားပြီး စဉ်းစဉ်းစားလေး ကြံစည်သမှုပြုနိုင်ပါစေသား။.
ကျုပ်အစောထဲကပြောပြီးပါပကောဗျာ… ကျုပ်တို့တွေတွေးတာထက်ပိုတွေးတတ်လို့ သူများထက်ထူး နဖူးဟိုဟာပေါက်ပြီး မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကို ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးနိုင်ကြတာလေ။
အသင်ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပြန်ပြောရရင် သေပြီးသားဘုရားကို သက်သေထူချင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘော ပေါ့။ ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရှေ့က
ထောင်အကြာင်းပြောနေတော့ ထောင်ထဲရောက်ဖူးလို့လား။ မတော်တရော် အမှုမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ရဟန္တာ ဘယ်နှစ်မျိုးကြားဖူးလဲ။ သေက္ခရဟန္တာက ဈန်မပျံ။ အသေက္ခရဟန္တာကမှ ဈန်ပျံမှာဗျ။ ရှင်းတယ်နော် ကနော့ချင် ချော်ချင်ရင် အရင်ဆုံး ရဟန္တာ ဘယ်နှစ်မျုိးရှိသလဲ အရင်လေ့လာပါဦး အမောင် ။ ရှင်းရဲ့လား။ ရှင်းလား။
lionkingကစာကိုသေချာမဖတ်ဘူးပဲ (ဘယ်လိုအဆင်.လဲဗျ၊ဈန်တွေဘာတွေရသလား၊) ကျနော်မေးတာရှင်းပါတယ်နော်၊ ရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးပေါ.ဗျာ။ ဈန်ကသမထသမားတွေလဲရနိုင်တယ်လို.
စာကိုသေချာဖတ်တာပေါ့ တိုတိုရေးလိုက်ချင်လို့ရယ်။ ဈန်မှာ သောတာပန် မပြောနဲ့ ဒေဝဒတ်လို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်ရသေးတာဗျာ ဈန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာပေါ့။ မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မရဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါလေးနဲနဲချဲ့မြင်လိုက်ရင် ကိစ္စကပြတ်ပြီဗျ။ ဒီပို့စ်ထဲကို ဝင်ဖတ်သူတိုင်း ရေးခွင်ရှိ တယ်ဆိုတာ မမေ့လေနဲ့ဦး။ ကျွန်တော်က မိုးလည်း မပြာသလို ပစ်စုပ်လည်း မပန်ဘူးဗျ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေတာပဲ။ ကနော့သော ပိုစ့်ကိုတွေ့က ကနော့ရပေ၏။ အတည်ပို့စ်ကို တွေ့က အတည်ပြောလေ၏ ။ရွှင်လန်းပါစေဗျား။
ကောင်းကင်းမှာ ပျံရအောင် ငှက်တွေမှ မဟုတ်တာ။ thantmonzaw လည်း သိုင်းဝတ္ထုလို စိတ်ကူးယဉ်စာအုပ်တွေ လျှောက်ဖတ်ထားတယ်နဲ့ တူတယ်။ ဈာန်ဆိုတာ ကောင်းကင်ပျံတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အလုပ်မှာ ကိုယ်သေသေချာချာ ပိုင်းပိုင်းခြားခြား ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စိတ်ဝင်စားနိုင်တာကိုပြောတာလို့ နားလည်ပေး။ ကောင်းကင်က သွားချင်ရင် လေယာဉ်ပျံနဲ့ သွားလေ။ thantmonzaw ရေ သိဟိုဠ်ခေတ်က စိတ်ကူးယဉ် ဘုန်းကြီးတွေ ထင်ရာရေးထားတာတွေ လျှောက် ယုံမနေနဲ့။ လူရယ်စရာကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
ပြောရမှာတော့ အားနာတယ်ဗျာ thantmonzaw ရေ။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်လေ့လာမိ သလောက် ပြောပြတာပါ။ ရဟန္တာဆိုတာ ကောင်းကင်ပျံတယ်၊ မပျံဘူးဆိုတာကို ပုံပြင်တပုဒ်လောက် စိတ်မဝင်းစားဘူးဗျ။ ကြုံလို့ သိတာလေး လေ့လာမိတာလေး ဝေငှမိတာပါ။ ခင်ဗျားက ကောင်းကင်မှာ ပျံတဲ့ ဈန်ရရဟန္တာကို စိတ်ဝင်စားလို့လား။ ဒါဆိုရင် ဦးဌေးလှိုင် (ဓမ္မာစရိယ) ရေးတဲ့ ရဟန္တာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများစာအုပ်မှာ လေ့လာကြည့်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ အဲသည်စာအုပ်ထဲ အပြည့်အစုံပါမယ်ထင်လို့ပါ။ လန်းဖြာပါစေ။
thantmonzaw နားလည်ထားတဲ့ ရဟန္တာနဲ့ မောင်မိုးပြာတို့နားလည်တဲ့ ရဟန္တာ တူမှာမဟုတ်တာ
ဝိတက်၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧက္ကဂတာဆိုတာပထမဈန်လို.
မိုးပြာ ဂိုဏ်းအတွက် တကယ် က ရဟန္တာဖြစ်ဖြစ်၊ အရိယာဖြစ်ဖြစ်၊ သားသတ်သမားဖြစ်ဖြစ်၊ ယဇ်ပူဇော်တဲ့သမားဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးဘူးလေဗျာ။
နောက်ဘ၀မှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် ထည့်စဉ်းစားစရာမှမလိုတာ။ ဒီဘ၀ဇတ်သိမ်းပြီး ပြီးပြီလေ။
(မှတ်ချက်။ သားသတ်သမားဖြစ်ဖြစ်၊ ယဇ်ပူဇော်တဲ့သမားဖြစ်ဖြစ် အပြစ်မရှိ။ လို့ မိုးပြာဝါဒက ဆိုသဗျ)
True Answer ခင်ဗျား…
နောက်တခု… သတိထားမိစေဖို့က.. မိုးပြာလို့ခေါ်နေတဲ့.. ၀ါဒကို..လက်ခံထားသူ မြန်မာပြည်ထဲတင်.. သိန်းဂဏန်းရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ..။
တပိုဒ်ခြင်း.. တကွက်ချင်း.. ပညာရှင်ဆန်ဆန်.. .တရားပြိုင်ဆွေးနွေးစေလိုတာပါပဲ..
True Answer ရေ realman အနေနဲ့ ၀င်လေ့လာနေတာ အခုတော့ ပါရပြီပေါ့။ ထင်ကြေးနဲ့ လျှောက်မရမ်းပါနဲ့လေ။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသလိုရေးကြမှာပဲ။ ဘယ်သူက ဘယ်သူနဲ့တူတယ်၊ ဘယ်သူက ဘယ်ဝါဒကို ကိုယ်စားပြုနေတာပဲလို့ အချိန်ကုန်ခံ စဉ်းစားမနေနဲ့။ realman ဆိုတာ မှန်တဲ့ဘက်က အမြဲရပ်တည်မယ့် သူပါဗျာ။ အခုရေးနေကြတဲ့ သူတွေကလည်း သူတို post သူတို့ တာဝန်ယူကြပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ True Answer လည်း ကိုယ့် post ကိုယ်တာဝန်ယူပေါ့။ ထေရ၀ါဒတွေ၊ မဟာယာနတွေ၊ မိုးပြာတွေဆိုပြီး ဘောင်မခက်ထားပဲ ပြောဆိုတာတွေကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဲလောက်တော်မှန်း မသိခဲ့ဘူး။ လူတစ်ယောက်ထဲက လူခြောက်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ညီမျှနေလောက်အောင်တောင်ဆုိုတော့ နဲနဲတောင် ဘဝင်မြှင့်ချင်လာပြီ။
အင်… ကျူပ်ကတော. နောက်ဘ၀ဆိုတာ မကြည်.ပဲ လက်ရှိဘ၀တစ်ခုပဲကြည်.မယ်ဆိုရင် ကျူပ်လဲ ..ဖိုးကြာဂိုဏ်းတို. မိုးကြိုးပစ်ဂိုဏ်း တို. ဆိုပြီး ထောင်ပလိုက်မယ်။ မကောင်းတဲ.၊ မသမာတဲ.နည်းနဲ.စီးပွား၇ှာ ချမ်းသာနေတဲ.သူတွေကို ဓါးပြ တိုက်မယ် ။ ကိုယ်.အတွက်ဝေစုယူပြီး ကျန်တာတွေကို ဆင်း၇ဲတဲ.သူတွေကိုလှူမယ်၊ ဂေါတမ ဘုးရားကိုရည်စူးပြီးလှူမယ်( ဘုရားက ဓါးပြတိုလို.ရတာကို မလှူရလို.မပြောခဲ.ဖူးထင်တယ် ငါ၇ှင်တို.)။ ကဲဒါဆို ကျူပ်လဲ ချမ်းသာမယ်.. နိမ်.ကျတဲ.သူတွေလဲ အဆင်ပြေမယ်..။ စကားတွေအကြီးကြီးပြောပြီး ဘာမှအကျိုးမပြုနိုင်ရင် အလကား..ဘာမှတန်းဖို.မရှိ။ (ဥပမာ.. ဗမာပြည်အတွက် ဆိုပြီးပြောနေတဲ. အတိုက်အခံတွေလိုပေါ.) ..ကဲဟေ…..ရွာထဲမှာ ဖိုးကြာဂိုဏ်းထောင်မယ်…လူစုပြီး သူကြိးအိမ်သွားတိုက်မယ်…..၇ွာထဲက မန်ဘာတွေကို အချိုးကျ ခွဲပေးမယ်….. အမြန်စာရင်းပေးရရန်…
မကောင်းမှုကို အနည်းဆုံး ကိုယ့်အိမ့်မှာပဲ ငါကိုင်တုတ်ပြီးဆဲကြည့်စမ်းပါ ဘာမှမဖြစ်လောက်ဘူးလား။ သိချင်ရင် လက်တွေ့သာ အကောင်အထည်ဖော်ကြည့်။ အိမ်ပေါ်ကနေ ကန်ချမခံရင် ကျုပ်ကိုပြော။ ရာဇဝင်လူဆိုးက အခုမကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေကို အားကျနေပုံရတယ်။ သူတို့တွေကို အနီးကပ်သိခွင့်ရရင် ငိုချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားလောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရာဇဝင်လူဆိုးတော့ ပါမယ်မထင်။
ဟုတ်ကဲ့ ပါ သူကြီးမင်း
ကျွန်တော် ပို့စ်တစ်ခု ထပ် တင်လိုက်ပါ့မယ်။
သူကြီးမင်း စိတ်ပုတီးမကိုင်ပဲ…. တရားထိုင်နေခဲ့တာ.. အနှစ်အစိတ်မကရှိပြီ..။ ပျက်ရက်မရှိဘူးလို့တောင် ထင်မှတ်မိရဲ့..။ ပျက်လည်း ၁၀ရက်ထက်တော့..မပိုလောက်ဖူး..။